တစ္ႏိုင္ငံလုံးစိတ္ဝင္စားေနၾကၿပီး သိထားသင့္တဲ့ လွိမ့္ဝင္တည္သုံးယၾတာ အေၾကာင္း – Daily News
”လွိမ့္ဝင္ တည္သုံး ” စဥ့္အိုးေလးေတြ ဘယ္လို ဓာတ္ဆင္ရတာပါလဲ။ အဲဒီလွိမ့္ဝင္ တည္သုံး အ႐ုပ္ေလးေတြ က ဟို အရင္ ေလာကီပညာရွင္ (ဆန္းပညာရွင္) ေတြ လုပ္သြားခဲ့တာပါ ။ ပညႇပ္သြားရာ ဓါတ္သက္ပါ ဆိုသလို လူအမ်ားသုံးစကား လွိမ့္ဝင္ ဆိုတာကို ယူၿပီး လွိမ့္ဝင္ ေနတဲ့ …အ႐ုပ္ကေလး ေတြ ကို စီရင္ေပးသြားတာပါ ။
တစ်နိုင်ငံလုံးစိတ်ဝင်စားနေကြပြီး သိထားသင့်တဲ့ လှိမ့်ဝင်တည်သုံးယတြာ အကြောင်း
တစ်နိုင်ငံလုံးစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ လှိမ့်ဝင် တည်သုံးယတြာက ကျွန်တော်စခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ ။ အျဖစ္က ဒီလိုပါ ။ လှိမ့် ဝင် တည် သုံး
အရမ်းကို အဆင်ပြေပြီးနောက်ထပ်တိုက် တစ်လုံးတောင်ဆောက်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ သူ့လုပ်ငန်းက တအားလှိမ့်ဝင်သွားတာကို
အဲ့ သူ့အိမ်ရှေ့အဝင် ဝ မွာ လှိမ့်ဝင် စဥ့်အရုပ်လေးကို အိမ်ဘက်လှိမ့်ဝင်နေတဲ့ ပုံချိတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်
အိမ်ဧည့်ခန်းမှာတော့ စဥ့်အိုးလေးတည်နေတဲ့ပုံကို တင်ထားတာတွေ့ရပါတယ် မေးကြည့်တော့ လှိမ့် ဝင် တည် သုံးလေတဲ့ စီးပွားဖြစ်တယ် လုပ်ငန်းကောင်းတယ်တဲ့ဗျာ
၂။ ကျွန်တော်တို့ မြို့မှာ ထမင်းဆိုင်တစ်ဆိုင် ရှိတယ် အရမ်းကိုရောင်းရတယ်
အလှူပေးနေသလိုကိုရောင်းရတာသူတို့အိမ်မှာလည်း အိမ်ရှေ့သံတံခါး အုတ္ခုံမွာ အဲဒီ လှိမ့်ဝင် အရုပ်လေး အိမ္ဘက္ကို လှိမ့်ဝင်နေတဲ့ ပုံလေး တင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်
သူ့ထမင်းဆိုင်ကတော့ လူတွေ လှိမ့်ဝင်နေတော့တာပါပဲဗျာ
၃။ အဲ ဒါနဲ့ လူမဝင် လုပ်ငန်းမကောင်းတဲ့ သူနဲ့ အကြွေးတင်နေတဲ့မိတ်ဆွေ တစ်ယောက် နှစ်ယောက်ကို အဲဒီ အရုပ်လေး နှစ်ခုကို ထားဖို့ ပြောလိုက်တာ သူတို့လည်း ကျောက်ဆည် တပေါင်းပွဲနဲ့ကြုံတော့ စဥ့်ကူးက စဉ်အိုးသည်တွေ လာတာနဲ့ အဲဒီ အရုပ်လေးကို တစ်ရုပ်ကို အိမ်ရှေမှာထားပြီး တစ်ရုပ်ကို အိမ်ထဲမှာထားဖို့ ပြောလိုက်တာ
အဲဒီ ၃ယောက်ဟာ ၆လအတွင်း လုံးဝ မဆပ်နိုင်တော့ဘူးလို့ ထင်ထားတဲ့ အကြွေးတွေ ကြေပြီး အဆင်ပြေ သူတွေဖြစ်နေပါပြီဗျာ
အဲဒါကို အားလုံး သိအောင် ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တင်ပေးပါ လို့ ပြောလို့တင်ပေးရာကနေ လှိမ့်ဝင်တည်သုံး အိုးသည်တွေ ရောင်းမလောက် ဖြစ်ကုန်တော့ တာပါပဲ ဗ်ာ ။
လှိမ့်ဝင် တည်သုံး စဥ့်အိုးလေးတွေ ဘယ္လို ဓာတ်ဆင်ရတာပါလဲ။ အဲဒီလှိမ့်ဝင် တည်သုံး အရုပ်လေးတွေ က ဟို အရင် လောကီပညာရှင် (ဆန်းပညာရှင်) တွေ လုပ်သွားခဲ့တာပါ ။ ပညှပ်သွားရာ ဓါတ်သက်ပါ ဆိုသလို လူအမ်ားသုံးစကား လှိမ့်ဝင် ဆိုတာကို ယူပြီး လှိမ့်ဝင် နေတဲ့ အရုပ်ကလေး တွေ ကို စီရင်ပေးသွားတာပါ ။
အဲဒီမွာ စဥ့်အိုး လေး ကို လှိမ့်ဝင်နေတဲ့ ကောင်လေး( ၂ ၄ ) ပုံ လေးပါ ။ စဥ့်အိုးကို ဘာလို့သုံးလဲ . တစ်ခြားဟာတစ်ခုခုကိုလည်း လှိမ့်ဝင် လို့ ရတာပဲ လို့ တွေးမိတော့ .. စဥ့်အိုး = ၃ ၁ ဆိုတာ အောင်စေ = အေးစေ = ၁ ၃ ကို ကက်ကင်းရိုက်သွားတယ် ထင်ပါ တယ် ။
လှိမ့်ဝင် ဆိုတာကေတာ့ဗ်ာ လှမ့်ဝင် = ၄ ၄ = ရွှေလာ = လူလာ = လိုရာ = ရလာ ဓါတ်ပေါ့..
သာသနာ တည် နိုင်တဲ့ အထိ သုံး နိုင်ဖို့လောကီဝိဇ္ဇာ အဘမ်ားက စီရင် သြားခဲ့တဲ့ ဓါတ်အရုပ်လေးတွေပါ ။
ဘယ္လို သုံးမလဲ ၊ ဘယ္လို ဆောင်မလဲ ဗ်ာ
ကိုယ့်စီးပွားအတွက် အထွဋ် အမြတ်ဆောင် မည့် ပစ္စည်းဟာကားနဲ့သယ်လားရင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး ကေလး လူကြီး ကျော်ခွသွားတာ မျိုး ၊ ကားထိုင်ခံအောက်ထဲထည့် သယ်လာတာမျိုး တွေရှိတတ်ပါတယ်။
ပါးစပ်မှလည်း ဥုမ် သန သန သန အပေါင်း ထောင်သောင်း ကြေစရာ ကြေ ဆိုပြီး ၃၇ ခေါက် ရွတ်ပြီး မွ အဲဒီ အရုပ် မ်ားကို ၎င်းရေနဲ့ ဆေးပါ ။
တည်သုံး အိုး လေးကိုတော့ အလုပ္စားပြဲ ၊ အိပ်ခန်းစားပွဲ ၊ အိမ်ထဲမှာ ထားထားလိုက်ထူးထူးခြားခြား အဆင်ပြေလာတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ် ခင်ဗျာ ။။။
ဘယ်နေ့ ဘယ် အချိန်မှာ ဆောင် တင်ထားရမလဲမိမိမွေးနေ့မနက် 9း45 မွာ တင် ဆောင်ထားပါ လေ ။
လူ မ ဝင်သော ဆိုင်များ တည်းခိုခန်းများ ဟိုတယ္မ်ား လူများလှိမ့်ဝင်လာပါလိမ့်မယ် ။ အရောင်းအဝယ် လုပ်ငန်းများ သိသိသာသာတိုးတက္လာတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မည် ။
ပြီးတော့ လာထား လာထား ဆိုပြီး လက်ခုတ်တီးပြီးပြောလိုက်ပါ ။
ဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဗျာ .. ပထမဆုံး ဝင်သောငွေမှ အနည်းအကျင်းကိုဘုရားလှူ လိုက်ပါ ။ ပြီးမှ ကျန်တဲ့ ပိုက္ဆံကို သုံးပါလေ ။
ပထမ ဆုံးဝင်တဲ့ ပိုက္ဆံကို အနိဌ ပစ္စည်းတွေ ဝယ်မသုံးလိုက်ပါနဲ့ ။
နောက်ပြီး လာဒ်တိတ်စေ တဲ့ အကြောင်းတရားတွေ ကို ရှောင်ပေးရပါတယ်။ အရင် က ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုပြန်ရေး ပြလိုက်ရပါတယ် ဗ်ာ။
၁။ မနက် အိပ်ယာထလျှင် အိမ္သာ ထဲသို တန်း မသြားရ ၊မီးဖို ချောင်ထဲသို့ တန်းသွားပြီး မီးမွေးခြင်း ထမင်းအိုးတည်းခြင်း တန်းမလုပ်ရပါ။ လာဒ်တိတ်တတ်ပါသည်။
၂။ ထမင်းစားလျှင် ဘေးမှာကျနေသာ အမှိုက်များကိုထမင်းစားပြီး လျှင် မိမိပန်းကန်ထဲသို့ ထည့်ပြီးဆေးဖို့ မယူသြားရပါ။
၃။ စားပြီး အိုးခွက်ပန်းကန်များကို မနက်မှ ဆေးတော့ပါမယ်ဆိုပြီး မီးဖို ချောင်ထဲမှာ မေဆးပဲ တစ္ညလုံး ပုံမထား သင့်ပါ ။
၅။ လင်မယားအချင်းချင်း ၉ နာရီ မေက်ာ္မီ စောစောစီးစီးစကားများ ရန် မဖြစ်ရ။ မငြူစူးရ ၊ ဒေါသမဖြစ်ရပါ။ စောစော စီးစီး နိမိတ် မကောင်းသော အမင်္ဂလာ သီချင်းများ မဖွင့်ရပါ ။
အားလုံး ငွေကြေး ရတနာမ်ား လုပ်ငန်းကောင်းများ လှိမ့်ဝင်ကြပြီး
အလှူ အတမ်း ၊ ဘာသာရေး ၊ သာသာနာရေး ။ ပရဟိတ အေရး အတွက် တည်သုံးနိုင်ကြပါစေ လို့ ဆုတောင်း မေတ္တာ ပို့သ ရင်း .
Credit : ဆရာထွန်းအောင်လူ